“In laga badiyo Bayern Munich mucjiso ma noqon doonto” – Xavi – Gool FM
(Barcelona) 08 Dis 2021. Tababaraha kooxda Barcelona ee Xavi Hernandez ayaa aaminsan in haddii ay guul ka gaaraan Bayern Munich aysan noqon doonin mucjiso, inta lagu guda jiro kulanka ay caawa ku wada ciyaari doonaan tartanka Champions League.
Waxaa caawa la ciyaari doonaa kulammo lagu soo xirayo wareegga guruubyada tartanka Champions League, waxaana lagu dheeli doonaa garoommo kala duwan oo ku yaalla dalalka qaaradda Yurub.
Tababaraha kooxda Barcelona ee Xavi Hernandez oo kahor kulanka caawa ka soo muuqday shir jaraa’id, wuxuu yiri:
“Kulanka waxaan u ciyaari doonaa si xamaasad leh, waxaana la dheeli doonaa mid ka mid ah kooxaha ugu adag, iyo mid ka mid ah kooxaha ugu fiican adduunka, laakiin waxaan ognahay in arimuhu ay anaga nagu xiran yihiin, haddii aan guuleysano waan soo bixi doonnaa, horeyna uguma guulaysan Munich, taariikhduna way jirtaa in la jabiyo, aad baan u xamaasadeysanahay.”
“Waxaan u maleynayaa inaan diyaar u nahay inaan dagaalano, waxaana rajeynayaa in guuldarradii ugu dambeysay ee Bayern aysan saameyn nagu yeelan doonin, waxaan u dagaalami doonaa inaan noqono guuleystayaasha kulanka, waxaan isku dayi doonaa ilaa dhamaadka.”
“Waxaan isku dayi doonaa inaan sii wadno safarkayaga Champions League ilaa dhamaadka, waxaan ku tiirsanaan doonaa nafteena, xaallada way adkaan doontaa, marka ay kaa soo horjeedo koox adag.”
“Waxaan arki doonaa haddii waxa dhici doona ay yihiin mucjiso iyo in kale, kulanka kaddib waxaan ka hadli doonaa xaaladeena, mana u maleynayo in guusha Bayern ay noqon doonto mucjiso, Barcelona-na way garaaci kartaa koox kasta.”